Kungani izilwane zingahlali isikhathi eside njengabantu - The Kerry Blue Terrier Foundation
Shiya amazwana / Ukuphela kokuPhila, I-Euthanasia, ukulahlekelwa nokushonelwa, Stories / By Umhleli wewebhu we-KBTF / October 19, 2015 July 18, 2019 / ukuphela kwempilo, Sanibonani
Kuthunyelwe nguLisa Marie Wilkins
Njengoba ngibe udokotela wezilwane, ngangibizelwe ukuthi ngiyohlolelwa ukuba uBelker oneminyaka eyishumi ubudala. Abanikazi bezinja - uRon, umkakhe, uLisa, nabancane babo
umfana, uShane - bonke babenamathele kakhulu kuBelker futhi babenethemba lesimangaliso.
Ngayihlola iBelker ngathola ukuthi ibulawa umdlavuza. Ngatshela umndeni ukuthi azikho izimangaliso ezisele kuBelker, ngacela ukwenza i-euthanasia
inqubo yenja endala ekhaya labo.
Ngesikhathi sihlela, uRon noLisa bangitshele ukuthi bacabanga ukuthi kungaba kuhle ukuthi uShane oneminyaka emine abukele inqubo. Bezwa uShane
bangafunda okuthile kulokho okwenzeka.
Ngosuku olulandelayo, ngezwa ukubanjwa okujwayelekile emqaleni wami njengoba umndeni kaBelker wamzungeza. UShane wayebonakala ezolile, efuqa inja yakudala okokugcina
isikhathi, engangizibuza ngaso ukuthi uyayiqonda yini le nto eyenzekayo.
Kungakapheli nemizuzu embalwa, uBelker wasuka ngokuthula wahamba. Umfana omncane wayebonakala eyamukela inguquko kaBelker ngaphandle kobunzima noma ukudideka.
Sahlala ndawonye isikhashana ngemuva kokushona kukaBelker, sibuze ngokuzwakalayo ngeqiniso elibuhlungu lokuthi impilo yezilwane imfushane kunezimpilo zabantu.
UShane, obekade elalele ethule, wathi, "Ngiyazi ukuthi kungani."
Simangele, sonke saphendukela kuye. Okuphuma emlonyeni wakhe ngokulandelayo kwangimangaza - angikaze ngizwe incazelo eduduzayo.
Uthe, "Wonke umuntu uzelwe ukuze afunde impilo enhle - njengokuthanda wonke umuntu nokuba muhle, akunjalo?"
Le ntombazane eneminyaka emine yaqhubeka, "Hhayi, izilwane sezikwazi ukukwenza lokho, ngakho-ke akudingeki ukuthi zihlale isikhathi eside."